लेखक: Kelsea McDonough
Adelante सल्लाहकार काउन्सिल भेट्नुहोस्
Kelsea McDonough मा जुलाई 13, 2017 द्वारा लिखित।
भावनात्मक एमएएफ अधिवक्ताहरूको यो समूह कोष जुटाउने र न्यायको लागि मित्राना छ
२०१ 2016 को अन्त्यमा, MAF मा रोमाञ्चक समूह गठन गरियो: Adelante सल्लाहकार काउन्सिल (एएसी) एमएएफको पहिलो-पहिलो कमेटी हो जुन एमएएफको कार्यक्रमहरूको लागि सहयोग जुटाउन र अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, वित्तीय छायामा जीवन बिताइरहेका जनताको समस्याका बारे सचेतना जगाउन सर्वश्रेष्ठ रकम जुटाउने र मार्केटिंग स्रोतहरूको उत्तम उपयोग गर्नका लागि समर्पित छ।
एएसीका सात सदस्यहरू उत्कट खाडी क्षेत्रका पेशेवरहरू हुन्, तिनीहरू मध्ये प्रत्येक एक सीप र विशेषज्ञताको एक अद्वितीय सेट ल्याउँछ। तिनीहरू आफ्नो साझा विश्वासबाट एकजुट छन् कि सबैजना वित्तीय स्वतन्त्रतामा उचित शटको योग्य छन्। एएसी सदस्यहरू एमएएफ टोलीसँग सहयोग पुर्‍याउँछ कोष स initia्कलन पहलहरूलाई समर्थन गर्न, रणनीतिक सल्लाह प्रदान गर्न, र एमएएफको कार्य र मिसनका लागि राजदूतहरूको रूपमा सेवा गर्न।
कृपया हामी एडिएलान्ट सल्लाहकार परिषदलाई एमएएफ परिवारलाई स्वागत गर्नका लागि सामेल हुनुहोस्! यदि तपाईं एएसीको सदस्य बन्न रुचि राख्नुहुन्छ भने, कृपया यहाँ जानुहोस् [email protected]। हामी तपाइँबाट सुन्न चाहान्छौं।
यी नयाँ MAF राजदूतहरूको केहि जान्नको लागि पढ्नुहोस् र तिनीहरू किन एएसीमा सामेल भए सिक्नुहोस्।
सैली रोथम्यान - Wanelo मा संचालन को निर्देशक
“म एमएफमा सामेल भए किनकि मलाई लाग्छ कि सबैजना समान आर्थिक अवसरको योग्य छन्। केहि समुदायहरू, विशेष गरी कम आय र आप्रवासी परिवारहरू, हाल वित्तीय बजारबाट हटाइएको छ। एमएएफले गर्ने काम अवसर निर्माण गर्न र सबैको लागि खेल मैदान पनि महत्वपूर्ण छ। ”
जेसिका लेजेट - सात र गोल्ड LLC का सीईओ
"मँ आशा गर्दछु कि एमएएफ़ले गरिरहेको अविश्वसनीय कार्यको बारेमा समाचार फैलाउन मद्दत पुर्‍याउँछ र हाम्रा समर्थकहरूको वृद्धि गर्दछ ताकि हामी विस्तार गर्न र हाम्रो प्रभावलाई अझ गहिरो बनाउन सक्दछौं।"
साइना चिल्टन, पूँजी समूहमा इक्विटी लगानी विश्लेषक
"म सहभागी भएँ किनकि म एमएएफको कामबाट प्रेरणा पाएको छु र म हाम्रो वित्तीय प्रणालीलाई समावेशी बनाउन मा भाग लिन चाहन्छु।"
पीटर मेरिडिथ - मार्केटिंग र फन्ड सising्कलन सल्लाहकार
“मलाई लाग्छ कि न्यायसंगत संसार बनाउनको लागि आविष्कार आवश्यक छ। म म्याफलाई यसको समर्थनको आधार बनाउन सहयोग गर्न तत्पर छु ताकि यसले आफ्नो अग्रगामी कार्य विस्तार गर्न सक्दछ। ”
डेभ क्रिम - नो भ्याली सल्लाहकारका अध्यक्ष
“म एमएफमा सामेल भएँ किनकि माइक्रोलोनहरूले कम र मध्यम आय भएका परिवारहरू र व्यक्तिहरू विशेष गरी आप्रवासी समुदायहरूमा पर्ने सकारात्मक प्रभावको बारेमा म उत्साहित छु। म एएसीमा सामेल हुनुभयो जसले व्यक्तिगत दाताहरुमा एमएएफको पहुँचलाई विस्तार र सशक्त बनाउन मद्दत पुर्‍यायो, र हाम्रो सञ्चारलाई त्यस्तो आकारमा सिर्जना गर्‍यो जब कम आय र आप्रवासी समुदाय असाधारण दवावमा पर्दछ। पहिले भन्दा बढि, MAF को वित्तीय सेवाहरु एक महत्वपूर्ण स्रोत हुन सक्छ। "
धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो सबै Adelante सलाहकार काउन्सिल सदस्यहरु। यस लेखमा सामग्री योगदान पुर्‍याएकोमा स्याली रोथम्यानलाई विशेष धन्यवाद।
च्याम्पियन स्पटलाइट: गेबी जमुदियोसँग भेट्नुहोस्
Kelsea McDonough मा जुन 8, 2017 द्वारा लिखित।
उनी एक द्विभाषी यूआई विकासकर्ता र पिंग पong्ग प्रो हुन् जसले राम्रोको लागि टेक्नो प्रयोग गर्ने बारेमा जोखिम हुन्छन्।
GII Zamudio, दुई भाषिक विकासकर्ता UI मा विशेषज्ञता र एक चारैतिर सकारात्मक, व्यक्ति व्यक्ति जो सधैं उनको टेक सीप प्रयोग गर्नका लागि अवसरहरूको खोजी गरिरहन्छ स्थानीय भेट्टाउनुहोस् स्थानीय नाफामुखी संस्थाहरूलाई भेट्नुहोस्। गाबी सह-संस्थापक हो मेराकी क्रिएटिभ, महिला उद्यमीहरूको लागि एक समुदाय र थिचवर्क्समा एक पूर्व विकासकर्ता। २०१ 2016 देखि उनी एमएएफको टेक्नोलोजी एडवाइजरी काउन्सिल (टीएसी) का सदस्य भइन्, बे बे एरिया टेक कम्पनीका पेशेवरहरूको समूह जसले नेतृत्व, सल्लाह र सल्लाह प्रदान गर्ने एमएएफको प्रयोग प्रविधिलाई कम आय भएका उपभोक्ताहरूको वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्न मद्दत गर्दछ। ।
हामीसँग गेबीसँग बस्न र उनको MAF समर्थन गर्न ड्राइभको बारेमा अधिक जान्ने अवसर थियो।
GZ: म एक यूआई विकासकर्ता र डिजाइनरको रूपमा प्रशिक्षित छु र म डाटा र जानकारी प्रदर्शन गर्न रचनात्मक तरिकाहरू खोज्न मन पराउँछु। मैले भर्खरै यहाँ स्यान फ्रान्सिस्कोको जनरल असेंब्लीमा फ्रन्ट-एन्ड विकास कोर्समा निर्देशात्मक सहायकको रूपमा सेवा गर्ने अवसर पाएँ।
रमाईलो तथ्य यो हो कि धेरै मानिसहरू मेरो बारेमा जान्दैनन् कि त्यो हो कि मैले टेबल टेनिस (उर्फ पिंग पing्ग) खेल्दै गरेको छु, र प्रतियोगितामा मेरो क्षेत्र प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर पाएको छु। सामान्यतया म सहभागी हुने एकमात्र महिला थिइन, जसले मलाई प्रविधि उद्योगको लागि तयार गर्‍यो, जहाँ म प्रायः समान अनुभव गर्दछु।
GZ: पहिलो, सामाजिक न्याय मेरो लागि सधैं महत्त्वपूर्ण छ। म पेरुमा आन्तरिक द्वन्द्वको समयमा हुर्केको थिएँ जब त्यहाँ दुई शक्तिशाली आतंकी पार्टीहरू थिए, त्यसैले यो खतरनाक समय थियो। धेरै मानिसहरू हराए। मेरो आमाले मानव अधिकार संगठनको लागि काम गर्नुभयो र मेरो बुवा समाजशास्त्री र कार्यकर्ता थिए। मेरी आमाले उनको काममा यति धेरै राख्नु भयो। सानो छँदा मलाई याद छ कि म उसलाई अधिक भेट्न चाहन्छु, र त्यसपछि मेरो हृदय खोलेको महसुस गर्न सक्छ कि अरू मानिसहरूलाई मेरी आमालाई भन्दा मलाई बढी चाहिन्छ। मैले द्वन्द्व महसुस गरें किनकि अरू धेरैले जस्तो मसँग खानेकुरा र सुत्ने ठाउँ सुरक्षित थियो। तर म सजिलैसँग तिनीहरूको स्थितिमा हुन सक्थें। यो अनुभवले अधिक सामाजिक र आर्थिक दृष्टिगत विश्व निर्माण गर्न मेरो प्रतिबद्धतालाई आकार दियो।
दोस्रो, म आप्रवासी अधिकारहरूको बारेमा गहिरो ख्याल राख्छु। म १ age वर्षको उमेरमा म पेरुबाट संयुक्त राज्य अमेरिका सरेकी छु, त्यसैले म यस देशमा आप्रवासीहरूको अनुभवसँग सम्बन्धित हुन सक्छु।
अन्तमा, म वातावरण को बारे मा उत्साहित छु। खानीको शहरमा हुर्कदै गर्दा मैले देखेको छु कि यी उद्योगहरूले कसरी हाम्रा समुदायहरूलाई दूषित गर्छन्। यदि हामीले आफ्नो वातावरण संरक्षण गरेनौं भने हामी सामाजिक मुद्दाहरू र शिक्षा जस्ता अन्य विषयहरूमा प्रगति गर्न सक्षम हुनेछैनौं।
GZ: मैले पहिलो पटक एमएएफको बारेमा एक साथीको माध्यमबाट सुने जसले एक लेन्डिंग सर्कलमा भाग लिएका थिए, र मैले तुरून्त अभ्यास अभ्यास गरे। पेरूमा, धेरै व्यक्तिहरू समूहमा जवाफदेही हुँदा ठूला खरीदहरूको लागि पैसा बचाउन प्यान्डरोजमा भाग लिन्छन्। मलाई माया छ कसरी MAF ले क्रेडिट-निर्माण र वित्तीय शिक्षाको साथ समूहमा बचत गर्ने अभ्यासलाई जोड्दछ।
जब म अमेरिकाबाट एक्लै सर्छु, यहाँ वित्तीय प्रणाली मेरो लागि पूर्ण नयाँ थियो। मलाई थाहा थिएन क्रेडिट के हो।
जब मैले कलेज सुरू गरें, यो विद्यार्थी loanण प्रक्रिया नेभिगेट गर्न भ्रमित थियो। मैले आफूलाई चाहिने भन्दा बढी loansण सजिलै लिन सक्थें र आफूलाई बाहिरबाट छिर्न नसक्ने प्वालमा पुगें। धन्यबाद, त्यो भएन। तर मेरो अनुभवले मलाई सिकायो कि सबैजना - केवल आप्रवासीहरू होइन - अधिक जानकारी र उपकरणहरूबाट फाइदा लिन सक्छन् वित्तीय प्रणालीमा नेभिगेट गर्न।
एमएएफको पहिलो शिक्षा सिकेको केहि बर्ष पछि, एक मित्रले सुझाव दियो कि म एमएएफको नयाँ टेक्नोलोजी सल्लाहकार परिषद (टीएसी) मा हेर्नुहोस्। नाफामुखी संस्थाहरूसँग टेकको लागि प्रायः त्यस्तै संसाधनहरू हुँदैनन् जुन नाफामुखी कम्पनीहरूले गर्छन्, र म आफ्नो प्राविधिक विशेषज्ञता प्रयोग गर्न सम्मान गर्दछु एमएएफको टेक क्षमतामा थप्न र ठूलो प्रभाव सिर्जना गर्न मद्दत गर्न।
एमएएफ: तपाईं आफ्नो समय र सीपहरू हामी सँगै गर्ने काममा किन लगानी गर्नुहुन्छ?
GZ: मेरो लागि, यो मान्छेलाई सशक्त पार्ने कुरा हो। पहिलो टीएसी बैठकमा मैले लुइसलाई भेट्ने मौका पाएँ, जो अहिले सान फ्रान्सिस्कोको साल्भाडोरन रेष्टुरेन्ट, डि'माइजको स्वामित्वमा छन्। एमएएफबाट loanण ले उनलाई र उनकी श्रीमतीलाई क्रेडिट स्कोरहरू निर्माण गर्न र त्यसपछि तिनीहरूको व्यवसाय बढाउन ठूला loansणहरू पहुँच गर्न सक्षम गर्दछ। अन्ततः तिनीहरूले आफ्नो समुदायबाट स्टाफहरू भाडामा लिए, र अब उनीहरूले आफ्नो छोराको घटनाहरूको लागि क्याटरिंग दान गरेर फिर्ता दिन्छन्।
मलाई आशा छ ग्रानिटो डे एरेना (बालुवाको अन्न) यस अद्भुत लहर प्रभाव समर्थन।
एमएएफ: तपाइँ अर्को केही महीनामा सँगै हाम्रो काममा के हेर्दै हुनुहुन्छ?
GZ: म Lending Circles अनुप्रयोगको विकासलाई समर्थन गर्न अगाडि हेर्दै छु र अन्तिम संस्करण एक चोटि तयार भएपछि यो अवलोकन गर्दैछ। म यस प्रकारको एक प्रकारको अनुप्रयोगको डिजाईनलाई आकार दिन सहयोग पुर्‍याएकोमा गर्व महसुस गर्दछु। म आशा गर्दछु कि MAF टीमले जस्तो गर्व महसुस गरेको छ! हामी यस प्रविधिबाट के सिकेका छौं भनेर प्रतिबिम्बित गर्न म उत्साहित छु किनकि हामी बढि टेक उत्पादनहरूका साथ अगाडि बढ्छौं।